Kedu ka esi debe ngwaahịa m na Amazon site na nhazi ndepụta?
Onye ọ bụla na-ere ahịa na-aga ahịa nke ọma kwesịrị ịma otú e si ebute ngwaahịa na Amazon. Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na ịchọta ọkwa elu elu, ọ bụ kpọmkwem mgbe njirimara ọdịnaya na-abata. Ma ụlọ ahịa a juputara n'ugwu abughi otu ebe a. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga - egosi gị otu ị ga - esi bulie ngwaahịa gị na Amazon - naanị na ị na - ebute ụzọ n'ịchọpụta ngwaahịa n'ebe ahụ na ndepụta kachasị mma. A sị ka e kwuwe, ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị mma bụ ịkwado nke ọma na ọchụchọ ndị ahịa, nri?
Olee otú esi kwado ngwaahịa na Amazon na nhazi ndepụta ngwaahịa
Na-eche na ihe ọ bụla e depụtara na nke jupụtara n'ahịa n'Ịntanet nwere ike ịchọta naanị site na nhọrọ nchọta ngwaahịa, isiokwu ndị jupụtara n'ime ụlọ nyocha ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ozuzu njikarịcha nke ọma n'ebe ahụ. Ọ bụ ya mere o kwesịghị iju gị anya na ị na-eji nyocha ime nchọpụta zuru ezu na-eme ka ịlụ ọgụ bụ ihe mbụ ị ga-eme - t3cc clearomizer tank. Na ebe a bụ ụzọ ịkwado ngwaahịa gị na Amazon na nhọrọ ntinye nhọrọ kwesịrị ekwesị - M na-akwado inwe kickstart na Google Keyword Planner (naanị iji nweta nkọwa zuru ezu nke ọrụ a ma nweta nghọta bụ isi nke okwu ahụ), ka esoro ya nyocha nyocha nke bara uru na iji otu n'ime ihe ndị a ị họọrọ (M nwere ike ikwu na ị na-achọ ScientificSeller, KeywordKeg, MerchantWords, AMZ Tracker, ma ọ bụ Ọdịdị - ha niile bụ ezigbo mma na -eme ihe-egosipụta maka njirimara njirimara ngwaahịa Amazon).
Nke abụọ: Ọdịnaya Nhazi Ọdịnaya zuru ezu na Amazon
Ozugbo otu olulu mmiri dị mma dị njikere, oge eruola ka i jiri ha mee ihe maka atụmatụ nyocha. Tupu ịmalite, jide n'aka na ị ghọtara isi ihe Amazon chọrọ maka usoro ntọala siri ike, nke site na ndabara gụnyere Ndepụta Akụrụngwa, Nkọwapụta Ihe, Nkọwapụta Ngwaahịa, na Atụmatụ Nkwado.
Akwadoro ka edebe ya n'ogo 200.
Kwesịrị ịkọ akụkọ na ihe nha.
Na-enye ohere ka ederede nọmba na nọmba naanị.
Ọkwesighi itinye nọmba na / ma ọ bụ agba, ma ọ bụrụ na ọ bụ ma ọ bụ nkọwa dị mkpa ma ọ bụ na enwere nhọrọ dị ukwuu maka nhọrọ onye ahịa.
Isi ihe mpempe:
Kwesịrị ịdị ọcha ma doo anya mgbe nile, na edepụtara ya na nkenke dị ka o kwere mee.
Echere iji kpuchie ndepụta nke atụmatụ ngwaahịa na uru niile.
Kwesịrị ịkọwapụta naanị ihe ndị bụ isi banyere mkpa dị mkpa.
Na-aga n'ihu iji tinyekwuo oge ịdepụta ihe ọmụma ndị e tinyere na njide gị.
Kwesịrị ịgbakwunye ihe niile dị mkpa gbasara ngwaahịa ahụ.
A na-eche iji mee ihe isi ihe na-egbu mgbu nke onye ahịa na-eme ihe n'ụzọ dị mma.
Kwesịrị ịbụ ihe pụrụ iche, nke kachasị mma, na ọgaranya na isi isiokwu gị.
O nwere ike ịbụ na ị ga-adịwanye ike nke na okwu ọ bụla na-ere ngwaahịa gị.
Akwadoro mbido foto abụghịzi ihe osise itoolu ahụ.
Ọhụụ nke ọma na-ekiri nke ọma dị elu ga-abụrịrị ihe ka mma.
Iwere foto iji ngwaahịa, yana ndụ na nchịkọta nchịkọta bụ ihe kachasị mma iji kpochapụ ngwaahịa gị ma mesịa mee ka nsonaazụ ahịa gị n'ebe ahụ.